क्रान्तिकारीको मतगणना जारी: अध्यक्षमा शर्मा अगाडि, कसले कति मत पाए ? - Everest Dainik - News from Nepal
क्रान्तिकारीको मतगणना जारी: अध्यक्षमा शर्मा अगाडि, कसले कति मत पाए ?
काठमाडौं, भदौं १६ । नेकपा माओवादी केन्द्रको भातृ संगठन अखिल क्रान्तिकारीको नेतृत्व चयनका लागि अहिले मतगणना जारी छ ।
जारी मत गणनामा अध्यक्षमा अनिल शर्मा रञ्जित तामाङ भन्दा ७ मतले अगाडि छन ।
प्रदेश नं.१,२,४,६,७ को गणना सकिंदा शर्माले ४०५ र तामाङले ३९८ मत प्राप्त गरेका छन । यसअघि तामाङले लिड गरिरहेका थिए । उनीहरुबीच कडा प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ ।
याे पनि पढ्नुस पद्मकन्या क्याम्पस अध्यक्षमा अखिल क्रान्तिकारीबाट दन्ता नेपालीको उम्मेदवारी
अन्य पदाधिकारीमा कसले कति मत प्राप्त गरेका छन त ?
सुरेन्द्र बस्नेत -३७८
उद्वव भट्टराई -२८९
पुरन केसी – २७९
तिलक भण्डारी -२७४
दिपक देवकोटा -२७३
विजय गौतम -२१२
राजेश्वरी सुवेदी -२२१
ट्याग्स: Akhil Krantikari